ဒေဂနိ ရခိုင်သတင်း | မျိုးရခိုင်
Archives Select Month March 2009 (3)
ချယ်လ်ဆီး အသင်းကခေါ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှုးလေး ပါတို ချယ်လ်ဆီး အသင်းက ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားနေသည့် အေစီမီလန် အသင်း၏ လူငယ် တိုက်စစ်မှူးလေး ပါတိုက အေစီမီလန် အသင်းတွင်သာ ဆက်ရှိနေရန် လိုလားပါကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။ အေစီမီလန် နည်းပြဟောင်း ဖြစ်သူ အန်ဆလော့တီ အနေဖြင့် တပည့်ဟောင်း ပါတိုအား ချယ်လ်ဆီးသို့ အရောက် ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင် စားနေသော်လည်း ပါတိုက […]
ပင်နယ်တီသွင်းယူအပြီးအောင်ပွဲခံနေသူ လမ်းပတ်တတိယဂိုးသွင်းယူနေပုံ ရွန်နီဒုတိယဂိုးသွင်းယူသူ ဟတ်စကီးပထမဆုံးဂိုးအားသွင်းယူသူ ဘယ်ရီ2010 ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက်ခြေစစ်ပွဲများအဖြစ် ကာဇတ်စတန်အသင်းက အိမ်ကွင်းတွင် အင်္ဂလန်အသင်းအား အိမ်ကွင်းတွင် လက်ခံကစားခဲ့ရာ အင်္ဂလန် အသင်းက 0-4 ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်အသင်းအနေဖြင့် ယခုပွဲ အနိုင်ကြောင့်6ပွဲကစာ6းပွဲနိုင် 18 မှတ်ဖြင့် အုပ်စ […]
မန်ယူအပယ်ခံဥရောပဂိုးသွင်းဘုရင်ဆု ၂ ကြိမ်မြောက်ရရှိ
မန်ယူအသင်းတွင်ကစားခဲ့စဉ်ကဒီယေဂိုဖော်လန်ဥရောပရွှေဖိနပ်ဆုအားဒုတိယအကြိမ်ရရှိသူဒီယေဂိုဖော်လန်အက်သလက်တီကိုအသင်း၏ တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒီယေဂိုဖော်လန်မှာ ယခုနှစ် လာလီဂါ ပွဲစဉ်များအပြီးတွင် သွင်းဂိုး ၃၂ ဂိုးထိ သွင်းယူကာ လာလီဂါ ဂိုးသွင်းဘုရင် ဖြစ်သွားခဲ့ယုံသာမက ဥရောပဂိုးသွင်းဘုရင်ဆုကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပြန်ပြီဖြစ်သည်။ ဖော်လန်မှာ အင်္ဂလန်ထိပ်သီး မန်ယူ […]
The upcoming G20 meeting is critical if the world wishes to avoid the economic turbulence seen in the 1930s, the UK government has warned. Cabinet minister Douglas Alexander said the summit in London of the G20 group of rich and emerging nations next month “was an important moment”. G20 finance ministers pledged to makea[…]
Each night, BBC World News America with Matt Frei aims to ‘bring the world home’ to American viewers using the unparalleled international reach and resources of BBC News…and to cover stories IN America with the fresh and distinctive flair that only the BBC can provide.
နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မှီလက်နက်များနှင့် အတူ ရခိုင်ပြည်တော်လှန်ရေးပါတီ တခုမှ တပ်သား ၂ ဦးကို ဘင်္ဂလာ စစ်တပ်မှ ယမန်နေ့က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ဖမ်းဆီးမိသည့် လက်နက်များမှာ အမ်း ၁၆ မော်တာ အတွဲ တလက်၊ အမ်း ၁၆ တလက်၊ အက်စ် အယ်အာရ် တလက်နှင့် တရုတ်လုပ် ဆီးမီးရိုင်ဖယ် တလက်တို့ ဖြစ်သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူ နှစ်ဦးမှာ ကျန်မောင် မာရမာနှင့် ကိုဦးစိန်တို့ ဖြစ်ပြီး သူတို့နှစ်ဦးကို အဆိုပါ လက်နက်များနှင့် အတူ ရွာတော် (ဘင်ဒရိုဘင်) ခရိုင် ရွာချောင်းစရီ မြို့နယ် ဘင်ဂါရီ တောထဲတွင် ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ စစ်တပ်မှ များမကြာမှီကလည်း လက်နက် ၄ လက်နှင့်အတူ လူတဦးကို အသေဖမ်းဆီးမိပြီး နောက်တဦးကို အရှင် ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်။
ဒေသခံများ အပြောအရ ရခိုင်ပြည် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ (ဒီပီအေ) မှ လူငယ် ၄ ဦးမှာ လက်နက် ရှစ်လက်နှင့်အတူ ထွက်ပြေးလာပြီး ရွာချောင်းဆရီ အရောက်တွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပထမ အကြိမ် လက်နက် ၄ လက်ကို ဘင်္ဂလာ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး သွားခဲ့သည်ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲတွင် တဦးသေပြီး တဦးကို ဘင်္ဂလာ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ယခု ဖမ်းဆီးမူမှာ ဒုတ်ိယ အကြိမ် ဖြစ်ပြီး လက်နက် ၄ လက် နှင့်အတူ တပ်သား နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း ဖြစ်သည်။
ရွာတော်မြို့မှ ရခိုင်တော်လှန်ရေးသမားဟောင်း တဦးက ယခု ဖမ်းဆီးမိသော လက်နက်များမှာ ဒီပီအေမှ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီး ဗိုလ်ရာဇာထံမှ ခွဲထွက်စဉ် ယူဆောင်သွားသော လက်နက်များ ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။
ယခုအခါ နယ်စပ်တွင် အခြေအနေများ ရှုပ်ထွေးနေပြီ အခြေအနေ အသေးစိတ်ကို ပြောဆိုရန် ခက်ခဲနေကြောင်း သူက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒီပီအေ တာဝန်ရှိသူများအား ဖုံးဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းရန် ကြိုးစားရာ ယခုအချိန်ထိ ဆက်သွယ် ရရှိခြင်း မရှိသေးပါ။
မာတိကာ Select Categoryိနိစိုင်သတင်း (1) Uncategorized (2)